Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण 'दलितको दलित नबनौं'
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार २०:५४
कृष्ण कुमारी खतिवडा (महासमिति सदस्य नेपाली कांग्रेस)
कोही पनी जन्मजातै दलित हुँदैन । जब समाजमा मानिसलाई हेला गरिन्छ, उसलाई उसको अधिकारबाट बञ्चि राखिन्छ । जसलाई शारीरिक वा मानसिक रुपमा पिडा दिने गरिन्छ । मानिस कमजोर भएपछि आफूसँग भएको अन्याय सहन बाहेक केही प्रतिकार गर्न सक्दैन वा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनैतिक हिसावले पिछडीएको ब्यक्तिनै दलित हो ।
तर अचेल मानिसहरुमा यो दलित शब्दको गलत बुझाई देखेर म अचम्मित छु । अहिले दलित भनेकै कथित पानी नचल्ने जात वा समुदाय भनेर बुझिन थालिएको छ । पानी नचलने कसले भनियो पहिला कामी, दमाई, सार्की, गाईने, चमार, पासवान अनेक थरीको सबै नाम लेख्नु र भन्नु पर्थ्यो तर अहिले थोकमै ‘दलित’ भनिदिएसी कुरा राप साफ, सबैलाई एउटैमा शब्दले काण्ड पुर्याई दिन्छ । यो सबैलाई दलित भन्ने नि यो समाज होइन त ।
मैले दलितको परिभाषा आज सम्म बुझेको छैन । त्यो परिभाषा भित्र भट्टराई, पौडेल, गुरुङ्, खरेल तामाङ श्रेष्ठ वा सामाजका जुनसुकै जातका ब्यक्ती पनि पर्न सक्छन । सरकारले दलितको नाउमा विभिन्न कोटा र सुबिधा दिएको छ तर यो राहत र सुबिधा वास्तविक दलितसम्म पुग्न सकेको छैन । यसको दुरुपयोग भएको छ, जस्तोकी उदारहणको लागी काठमाडौँको बौद्धमा सुनको पसल छ उनको पसलमा काम लगायको मानिस अधिकारी नेपाल रहेछन् । अब उनिहरुका छोरा डाक्टर पढने भए पछि अरबौ रुपैयाँको पसल थापेका सुनवारका छोराले ६० प्रतिशत लिएर परिक्षामा पास गरे तर उनका पसलमा काम गर्ने नेपालका छोराले ८० प्रतिशत लिएर पास गरे अब भनु होस् कसले डाक्टर पढ्न पाउने भो आरक्षण कोटामा कस्ताले पढन पाउदै छन् ।
सरकारको परिभाषामाको दलित भित्र पर्छ तर महिनाको १५ हजारमा चौकीदारी गर्ने बाउन दलितमा पर्दैन र उसको छोराले सुनारको छोरासँग भिड्दा पछि पर्छ र उसले अरुनै बैकल्पीक क्षेत्र रोज्नुपर्छ । यहाँ दुई पात्रमा दलित को थियो रु सुनार वा नेपाल बाउन ? यो एक बृहत सर्बपक्षिय छलफलको विषय बनेको हो ।
दलितलाई सधैं दलितनै बनाई राख्ने खेलमा कथित दलित समुदायका केही पढेलेखेका र टाठाबाठा भनी टोपलीने ब्यक्तिहरु नै लागेका छन् । उनीहरु कुनै न कुनै संघसस्था खोलेर जे कुरालाई पनि जातिय रंग दिएर आफ्नै दुनो मात्रै सोझ्याउन तिर लाग्छन् । जस्तो की कुनै कथित तल्लो जात भनिने समुदायको कोही नारी बलात्कृत भए भने ‘दलित महिला बलात्कृत’ भनेर हेडलाइन न्युज बनाउँछन् । ओल्टै दलित, पोल्टै दलित भनेर कुरा उचालेर बसिखान गर्दैनन, हो तिमी अन्यायको बिरुद्द लड तर कुनै जातको लागी होईन मानवताको लागी लड हाम्रो पनि साथ हुनेछ ।
निर्मला पन्त पनि यसरी नै बलात्कृत भएर हत्या गरिएको थियो । उनको न्युजमा किन ‘बाउनी निर्मला बलात्कृत’ भनेर न्युज आएन ? उनीहरु पहिला मानब हुन, महिला हुन जबरजस्ती बाउनी, दलित, जनजाति दलित भनेर जात र धर्मको रंग दिएर समाजमा घृणा नफैलाउ र सामाजिक बिखण्डन नल्याउ, यो कार्य अति नै तुच्छ, अमानबिय र गैर कानुनी कार्य हो । मैले धेरै यस्ता कुरा सुनेको छु आफैलाई कथित दलित नेता भनेर चिनाउन रुचाउछन्, जो राजनीतिक नियुक्ति मन्त्री हरेक निकायमा सधैं एउटै अनुहार देखिन्छ । महिलाको नाममा जनजातिको नाममा दलितको नाममा म आफ्नो कुरा राखेको छु तर मैले समुदायको भन्दा व्यक्तिगत फाईदा हेर्ने झुन्डको कहिल्यै गोटी नबन्न दलितका नेताहरूलाई भन्न चाहान्छु ।
मैले एउटा कुरा अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन की त्यस्ता जातिय बिभेदको बिरुद्द लड्ने संस्थाहरुमा एउट पनि बाउन, नेवार, क्षेत्री, जनजातिहरुलाई समेटेर संयुक्त संगठन बनाएको देखेको छैन । यो लडाई कथित दलित भनिने समुदायले मात्रै लडेर पार लाग्ने लडाई होईन । महिलाको हिंसा र समानताको आवाज मात्रैले पुगेको छैन सोच राम्रो भएका सबैको साथ हुनु आवश्यक छ ।
अमेरिकाको कालाहरुको स्वतन्त्रताको लडाईमा गोराहरुले साथ नदिएको भए त्यो लडाई सफल हुन अझै कति कुर्नु पर्थ्यो । जसरी एन्टीभेनन (सर्पले टोकेको औषधी) (Antivenom) बनाउनको लागी सर्पकै बिष प्रयोग गरिन्छ । जुन आगोले पोल्यो त्यै आगोले सेक्छ भन्ने नेपाली उखान छ । त्यसरी नै जुन समुदायले छुवाछुत गरेको छ । तिनै समुदायको बिद्वानहरुलाई साथ लिएर अघि बढेमा यो लडाई अवस्य सफल हुनेछ । जति भ्रम गैरदलित समदायको साथीहरुले चिर्दा प्रभावकारी हुन्छ त्यति अरुले गर्दा हुँदैन ।
अहिले क्षेत्री, बाहुन, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, नेवार लगाएत सम्पूर्ण समुदायका साथीहरुमा यस्तो सोच र ब्यवहार छैन र अत्यन्तै न्युन रहेको छ । कही कतै दुर्गम गाउँमा घटेको एकाध घटनालाई लिएर सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्नु अन्याय हुन्छ । मलाई जीवनमा माया गर्ने साथीहरु मध्य ९५ प्रतिशत भन्दा बढी जनजाति छन् । हाम्रो कपडा सिलाउने ज्ञानेन्द्र नेपाली दाजु पूर्ण नेपाली दाजु थिए तर हाम्रो विवहामा खुट्टा धुएर टीका लगाएका थिए जनजातिको दाजुभाइले बोलाउँदा नै हाम्रो चेली भनुहुन्छ आज यति धेरै जातिय कुरामा मानिस किन बोलेका मलाई थाहै छैन् ।
मलाई राजनीतिक क्षेत्रमा सहयोग सधैं जनजातिको छ म उनीहरुको परिवार माँझ बस्छु, भान्छामा, मन्दिरमा र मनमा सबै ठाउँमा बस्छु । हामीले कामी, दमाई, सार्की लगाएतको आफ्नो जातमा गर्ब गर्न सिक्नुपर्छ । यो जातको नाम लिँदा हिनताबोध महशुस गर्नु भएन । तपाई आफै हिनताबोध वा तल्लो महशुस गर्नु भयो भने अरुले झन कसरी लिन्छन ?
म बाहुन हो मलाई जे भने पनि ठिकै लाग्छ । जसरी सेक्सको बारेमा खुलेर बहस नगर्दा समाजमा विकृती र अपराध बढेर गएको छ त्यसरी नै हामीले आफ्नै जात र छुवाछुतको बारेमा खुलेर बहस नगर्दा सामाजिक भेदभाव र सामाजिक अपराध पनि बढेको छ । दलित र सेक्स उस्तै हुन सबैले देख्ने गरी चल्दैन । लुकेर सबैलाई मज्जाले चल्छ । मैले दलित र सेक्स उस्तै भनेर किन चित्रण गर्न खोजे भनेर अचम्म पर्नु भएको होला, जुन कुराबाट हाम्रो उत्पति भो हामीले भन चाहदैनौ संसारको सुन्दर उत्पत्ति भएको हो । तर राति मज्जाले श्रीमतीसँग समागम हुँदा शिरदेखी पाउसम्म मुई खाएको श्रीमान् भोली बिहान उठ्दा श्रीमतीलाई उसैको पाउमा शीर राखेर ढोग्न लाउँछ । परिवारको अगाडी छुन त परको कुरा बोल्न पनि गार्हो गर्छन् किनकी हाम्रो समाजको बनावट नै यस्तै छ ।
पुरुषले घमण्ड किन गरेका थाहै छैन । मलाई ठीक त्यसरी नै कामी, दमाई, सार्की, गाईने समाजको लागी अति आवश्यक समुदाय हुन । उनिहरुको समाजमा ठुलो योगदान छ । उनिहरुले समाजलाई बाच्नको लागी अत्यावश्यक चीजहरु बनाएर यो समाजलाई बाँच्न सहज बनाईदिए तर यै समाजले हात हतियार, कृषी, सामग्री, भाडाकुडा, गरगहना, लत्ताकपडा, जुत्ता चप्पल, मन्दिर सबै बनाउने यीनै समुदायको जीवननै असहज बनाईदिए ।
चाहिदा सबै चल्ने नचाहिँदा पानी पनि नचल्ने कथित दलित समुदाय कुनै कोरनाका भाईरस होईनन् । तपाईलाई छोए वा भित्र छिरे तपाईको मृत्यु हुने, दुई महिना त तपाईहरु पनि अछुत भएर चारैतिर झ्याल ढोका बन्द गरिदिएर सिमित ठाउँमा मात्र मान्छेले बाच्नु पर्दाको अछुतको जिन्दगी बाँचेर हेरिसक्नु भएको छ । अझै कतिदिन यसरी बाँच्नुपर्ने हो थाहा छैन । तपाईहरु चैत्र ११ देखि आज कति दिन भो लकडाउन सहन नसकेर सरकारलाई कति गाली गर्नु भएको छ । कति आत्तिनु भएको छ । कथित दलितहरु जिन्दगी भर नै सामाजिक लकडाउनमा जीवन कसरी बिताए र बिताउँछन् होला ? कहिल्यै सोच्नु भएको छ ?
मानव भएर बाँच्नुस र मानव जसरी बाँच्न दिनुस् । मानवलाई मानव जस्तो ब्यवहार गर्नुस चार धाम जानै पर्दैन । सबै मानव हो, पशुको पनि बोलि मात्र नआउने हो तर चेतना छ, हो सबै कुरामा इस्मण शक्ति छ । कुकुर घरमै भित्र बस्न मिल्ने मानिस पानी नचल्ने भनेर तुच्छ ब्यबहार गर्ने जस्तो तुच्छ र पाप कार्य संसारमा सायद अरु केही कहि नहोला ।